FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BULL TERRIER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bull Terrier
Wally the white standard Bull Terrier eo amin'ny 9 taona eo ho eo
Lisitry ny alika mifangaro Bull Terrier
English Teritery Bull Terrier
Ny Bull Terrier dia alika miorina mafy sy hozatra. Ny vatana dia boribory tsara amin'ny lamosina fohy sy matanjaka. Ny loha dia lava sy matanjaka, endrika boribory lavalava, saika fisaka eo an-tampony, mitongilana midina hatrany amin'ny orona tsy misy fijanonana. Mainty ny orona. Ny maso dia miendrika amandy, kely sy matevina, loko mainty. Kely sy mahia ary mifanakaiky ny sofina. Ny hatoka lava dia be hozatra, miaraka amin'ny soroka matanjaka. Ny rambony dia apetraka ambany ary amin'ny lafiny fohy, entina mitsivalana. Ny palitao dia matevina, fohy, fisaka ary masiaka raha mikasika azy. Ny AKC dia manaiky karazana loko roa, ny White Bull Terrier ary ny Colored Bull Terrier. Ny White Bull Terrier dia avela manana marika miloko eo amin'ny loha, fa tsy amin'ny toerana hafa amin'ny vatana. Ny Colored Bull Terriers dia mety mainty, brindle, black-brindle, mena, fawn ary tricolor misy marika fotsy.
afangaro amin'ny rottweiler ny lab mainty
Na dia gladiatera masiaka aza ity karazany ity dia malefaka kokoa izy izao. Ny Bull Terrier dia mety hisy fiantraikany fisorohana ary mety hiaro ny tompony amin'ny toe-javatra tena misy fitsikerana izany, saingy tsy noheverina ho lasa amboa mpiambina . Be herim-po, be herim-po, tia olona mahafinaritra, mavitrika, marefo ary tsy matahotra i Bull Terrier. Lasa mifamatotra amin'ny tompony izy ireo. Miroborobo ny Bull Terrier fitarihana mafy orina sy tsy miovaova sy ny fitiavana ary manao biby fiompy tsara. Bull Terriers dia te-hanao zavatra ary mifanaraka tsara amin'ny fianakaviana mavitrika izay ahazoana fiaraha-miasa sy fanaraha-maso betsaka. Tsy mahomby izy ireo amin'ny toe-javatra avela irery mandritra ny 8 ora isan'andro. Miaraka amin'ny karazana tompony marina ity karazany ity dia mahafaly ny manana, nefa tsy atolotra ho an'ny ankamaroan'ny ankohonana. Fondan'ny olon-dehibe sy ny zaza, fa raha tsy ampy ara-batana sy ara-tsaina izy ireo FANAZARAN-TENA mety ho mahery vaika loatra ho an'ny ankizy kely izy ireo. Ny ankizy dia tokony hampianarina haneho fahaiza-mitarika amin'ny alika. Ny tompona malemy fanahy dia hahita azy ireo ho lasa tena miaro, manao fanahy iniana, manana ary / na saro-piaro. Bull Terriers dia mety manandrana miditra amin'ny fikorontanana ao anaty fianakaviana na ady. Mila fiofanana mafy orina sy fanatanjahan-tena be dia be izy ireo. Bull Terriers dia tsy maintsy omena rafitra maro, na mety izy ireo manjary manimba . Aza hadino ny mampiaraka azy ireo tsara sy mijanona ho azy mpitarika fonosana 100% amin'ny fotoana, raha tsy izany dia mety ho mahery setra amin'ny alika hafa izy ireo. Ny lahy tsy miova dia mety tsy hifanaraka amin'ny alika lahy hafa. Tsy amporisihina miaraka amin'ny hafa izy ireo biby fiompy tsy kaninina toy ny bitro , hamsters SY kisoa ginea . Alika mpiambina tsara izy ireo. Ity karazana ity dia mety ho somary sarotra ny mampiofana.
Haavony: 20 - 24 santimetatra (51 - 61 sm) lanja: 45 - 80 pounds (20 - 36 kg)
Haavony: 10 - 14 santimetatra (25 - 33 cm) lanja: hatramin'ny 24 - 33 pounds (11 - 15 kg)
Mora tratran'ny patella (fanesorana ny kneecaps), kilema amin'ny fo, tsy fahombiazan'ny voa ary ny aretin-koditra ary parasy. Mora mijaly noho ny tsy fahampiana zinc, izay mety hiteraka fahafatesana. Mora mahazo lanja. Aza misakafo be loatra. White Bull Terriers dia mora tohina marenina .
Bull Terriers dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampy ny fampiasan'izy ireo. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary hisy tokontany kely. Tian'izy ireo ny toetrandro mafana.
Mila fampihetseham-batana isan'andro mahery ity karazana ity, izay misy a mandeha isan'andro, mandeha lavitra . Ny Bull Terrier dia manana fironana ho tonga matavy be loatra ary kamo raha tsy ampiasaina tsara.
Puppy 1 ary hatramin'ny 9, 5 eo ho eo
Ny Bull Terrier dia mora taovolony. Famonoana sy fikosehana tsindraindray no hatao. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony, mandatsaka indroa isan-taona. Azonao atao ny manala volo volo amin'ny fikosehana isan'andro amin'ny fonon-tànana manokana.
Tany am-piandohan'ny taona 1800 dia nalaza ny Bulldogs niampita terriers. Tamin'ny 1830 dia teo an-tampon'ny lazany ny ady teo amin'ny Bulldogs sy ny omby. Ireo izay tia an'ity antsoina hoe 'fanatanjahantena' ity dia nanapa-kevitra ny hamorona alika hanafika mora kokoa. Niampita ny Bulldog niaraka tamin'ny Old English Terrier izy ireo, ary nanampy tamin'ny ra Espaniola Pointer fa ny vokatr'izany dia ny Bull Terrier. Tsy ela dia hitan'izy ireo fa ny Bull Terriers dia tsy mpiady nahomby indrindra. Tamin'ny 1860, ny karazana fotsy mifono fotsy, izay nantsoina hoe 'White Cavalier', dia novokarin'ilay mpivarotra alika anglisy James Hinks ary vetivety dia lasa biby fiompy ho an'ny olona ambony. Ny karazana loko Bull Terriers dia noforonina tamin'ny fiampitana azy ireo niaraka tamin'ny Staffordshires brindle. Ny karazany dia nampiasaina ho mpiambina, mpihaza, mpiandry omby ary mpiambina. Ny Miniature dia novolavolaina mba hanana toetra mitovy amin'ny Standard Bull Terrier saingy manana habe azo tantanana kokoa. Ny Standard Bull Terrier dia neken'ny AKC voalohany tamin'ny taona 1885 sy ny Miniature Bull Terrier tamin'ny taona 1991. Raha ny AKC dia mahita ny Standard Bull Terrier sy ny Miniature Bull Terrier ho karazany misaraka, ny fepetra takiana mahazatra dia mitovy afa-tsy ny habeny. Ny ankamaroan'ny klioba hafa dia mahita azy ireo ho karazany samihafa amin'ny karazany iray na karazana iray ihany nefa tsy mametraka marika isan-karazany. Ohatra, ny FCI (Federation Cynologique Internationale) dia samy manana ny karazany voatanisa ao ambanin'i Bull Terrier, manasaraka azy ireo amin'ny karazana Standard sy Miniature. Ny UKC (United Kennel Club) dia tsy mametraka fetra na haavo na mavesatra fa mitaky ny lanjan'ny alika. Ny Bull Terrier dia neken'ny United Kennel Club tamin'ny 1948.
Clementine the Bull Terrier amin'ny 1 taona
Winston the Miniature English Bull Terrier aseho eto toy ny alika kely— 'Winston dia hatsikana kely mahafinaritra, feno fitiavana ary hadalana! Tiany ny ankizy sy ny alika hafa ary milalao isan'andro miaraka amin'ireo alika manodidina anay izay manomboka Yorkie Terriers ny Androany tsara sy ny zavatra rehetra eo anelanelany. Tena nitandrina tsara tamin'i Winston aho rehefa tonga fanofanana sy fiaraha-miasa izy tamin'ny andro 1, satria ny karazany dia matetika lazaina fa mahery setra sy tsy zaka. Mafy loha izy nefa tsy misy fisalasalana ary mihoatra ny tadin-dronono vao mahasarika ny sainy fa amin'ny fomba fampiofanana an'i Cesar Milan, heveriko fa nivadika ho tsara izy! Tena nitandrina aho rehefa nikaroka mpiompy ary tonga hatrany Polonina izy! Nandeha 12 ora izy tamin'ny fitambarany ary ny faharoa nanokatra ny varavaran'ny vavahady, dia nahita fahatokisana tena hitako tamin'ny alika izy, nanome ahy sniff sy oroka haingana ary izy dia mpikambana kely feno fitiavana sy falifaly ao aminay. fianakaviana hatrizay! Hamaky amin'ny fiteny hafa Tsy azoko an-tsaina ny fiainako raha tsy teo izy izao! '
'Spuds dia Teritoranta Bull Bull English. Ny fandokoany dia antsoina hoe smut mena matevina, izay tsy dia fahita matetika. Vao feno herintaona izy tamin'ity herinandro ity! Tena nitandrina izahay tamin'ny fampiakarana azy ho tia alika ary hanaiky olona tsy fantatra, satria ireo no toetra ratsy sasany amin'ity karazany ity mety hanjary olana raha tsy mifanerasera mialoha amin'ireny ianao. Teraka tamin'ny fimonomonona am-po izy, ary tsy maintsy hotandremantsika foana izany. Ity dia olana ara-pahasalamana mahazatra eo amin'ny karazany, ary ny olona tsirairay dia tokony hitandrina mba tsy hividy alika kely fotsiny amin'ireo mpiompy tompon'andraikitra izay mizaha toetra ny olon-dehibe mba hialana amin'io olana io. '
Spuds, English Bull Terrier — ny fandokoany dia antsoina hoe smut mena matanjaka.
Spuds, teratany anglisy Bull Terrier amin'ny 3 volana
Multi CH. Crystal Javelin Hugo Boss ilay Miniature Bull Terrier amin'ny 5 taona - 'Hugo dia zazalahy be vava mahafinaritra mankafy fiainana! Tiany ny milalao ny baolina teniny sy milalao loto. Ny sakafony ankafiziny dia ny sombin-databatra ary ny toerana tena tiany hisy dia ny fihinana eo akaikinao! Faly izahay fa manana zazalahy kely tsara tarehy toy izany ao amin'ny fianakavianay. '
alika omby aostraliana afangaro alika kely
Sary natolotry ny Rene Wheeler, Camino Miniature Bull Terriers
Zola dia Bull Terrier habe.
Jereo ohatra hafa momba ny Bull Terrier
Sary Bull Terrier 1
Bull Terrier Sary 2
Bull Terrier Sary 3
Alika Bull Terrier: Sarivongana Vintage azo angonina
frantsay bulldog mpanao ady totohondry Mix alika kely
orona manga fangaro husky mifangaro
pomeranian sy bichon frize mifangaro
alban malamute alemania mpiandry ondry siberian husky mix
cavalier mpanjaka spaniel poodle Mix
amerikana bulldog alemanina mpiandry ondry mifangaro
pitbull sy chow afangaro alika kely